Our Daily Bread Audio Facebook. Welcome... မုရန် စတင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
Our Daily Bread Audio Facebook.
မုရန် စတင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည် "တိုတောင်းသော နှုတ်ကပတ်တော်" များကို စက္ကန့် မိနစ်တိုင်း ယုံကြည်သူများထံ ပို့ဆောင်ရေး ..ဖြစ်ပါသည်။
မိမိမလုပ်နိုင်သော်လည်း လုပ်နိုင်သူများကို အားပေးရေးဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာဘာသာ ကျမ်းစာ ပထမဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီး စာလုံးပေါင်းမှားခြင်းများကို အလွန်ပြစ်တင်ခံရသည်။ ကျမ်စာအသင်းမှ ဆရာကြီးတပါးက ထိုဝက်ဆိုဒ်ကို ဖြက်သိမ်းပါ ဟု တောမထာပေးခဲ့ အထိဖြစ်ခဲ့သည်။ ရယ်စရာသမိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ After 11 years, ၁၁နှစ်အကြာ ယခု ၂၀၁၆ တွင် မြန်မာအင်္ဂလိပ် ..www.burmesebible.com . ပျက်စီးသွားလေပြီ။ (by virus)
http://murann.com/BurmeseBible/public .. မြန်မာသမ္မာကျမ်းစာ လေ့လာရေး ဝက်ဆိုဒ်ကတော့ ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ရှင်သန်ဆဲဖြစ်ပါသည်။
မိတ်ဆွေ ဘုရားသမီးငယ်တဦးမှ ယုဒသန်အသင်းတော် မီဒီယာအဖွဲ့ ကူညီသေား စာသား များဖြင့် ပထမဆုံးမိုဘိုင်းဖုန် မြန်မာဘိုင်ဘယ် Myanmar Bible (with blue color Myanmar map logo) နှင့် ချီမွမ်း သီချင်း (CheeMuam) အပလီကေးရှင်း App ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
မုရန် အပလီကေးရှင်း .Murann. လဲ ဒေါင်းလုပ်ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။
အင်္သထွက်ကျမ်းစာ မိမိမလုပ်နိုင်သော်လည်း .. ဒေါင်းလုပ်နိုင်ပါပြီ။
မိမိတို့လေးစားသော နေ့စဉ်ခွန်အား စာမျက်နှာများကို www.jbcs.org.sg...www.murann.com .. ဝက်ဆိုဒ် ဖေ့ဘုတ်များမှ ရှယ်ကြသည်။ တရားဝင် ခွင့်ပြုမှု ရဖို့ခက်သောကာလ ဖြစ်သောကြောင့် ထိရောက်သော အင်တာနက် ဖေ့ဘုတ်က သတင်းကောင်း နှုတ်ကပတ်တော်ကို ရှယ်ရပါသည်။
ဘိုင်ဘယ်အစ်စ် နှင့် နေ့စဉ်ခွန်အား .Bible.Is.. Our Daily Bread www.odb.org.. တို့ကို အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ်နိုင်ပါသည်။ မိမိဖိုးဘွားများကို စမတ်ဖုန် ကျပ်၃သောင်းတန် ဝယ်ပေး ဇက်ပြားနဲ့ ထရန်စဖာ လုပ်ပေးပြီး ဈေးချိုလာတဲ့ မြန်ပြည် ဖေ့ဘုတ်မှာ နားဆင်နိုင်အောင် ကူညီကြပါ။
Burmese Language Audio
မုရန်ကို ပံ့ပိုးပေးလှုသော အဖွဲ့စည်းမရှိသေးပါ။ တဦးချင်းမတည်မှုဖြင့် လုပ်ကိုင်ပါသည်။ တနေ့တွင် မုရန် ရပ်တံ့သွားမည်ဖြစ်သော်လည်း နှုတ်ကပတ်တော် မှာ ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းတော်ကြီးနေမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
Facebook Link (to see images)